Ngomhla ka-Matshi 2018-iiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2018 / EyoKwindla
ezaposwa ngomhla Matshi 30, 2018 Matshi 30, 2018
Uvavanyo lwe-Inrico T320 yiHamradio Concepts
Bukela uphononongo olupheleleyo lwevidiyo kwi-Inrico T320 eyenziwe yiHamradio Concetps.
Njengesiqhelo, uEric wenza uhlalutyo olumangalisayo kwi-T320 kunye nendlela enokusetyenziswa ngayo kwiindlela ezahlukeneyo zedijithali.
Jonga ividiyo Apha.
ezaposwa ngomhla Matshi 27, 2018 Matshi 27, 2018
I-TM7 WiFi kunye ne-GSM yangaphandle ye-eriyali mod
Kwabo baneengxaki ze-wifi kwi-TM7; le ncwadana yemifanekiso eyenziwe ngumhlobo wam olungileyo. Ndiza kuzama ukuguqula isicatshulwa kwiifoto kangangoko kunokwenzeka. Isizathu sesiginali esibi silula: ngaphakathi kwe-eriyali akuxhunyiwe.
1-Susa itape kunye neeplastiki. Emva koko uza kuyibona yonke i-motherboard.
2 - Iplastiki kunye netheyiphu ekufuneka isuswe.
3 -Lumka xa ususa iteyiphu. Isinxibelelanisi sinokonakala ngokulula.
I-4 -Ibhodi yomama ekulungele ukulungiswa.
5 - I-GSM, iWifi kunye neGPS (eqhagamshelwe kwangaphandle)
6 - Ukuphela kwe-eriyali kunye nesinxibelelanisi.
7 - Ungasibona ngokucacileyo isinxibelelanisi esiza kuthi sidibanise ne-GSM okanye isinxibelelanisi se-wifi ebhodini.
8 - I-TM7 ibonakala ngathi ine-eriyali yangaphakathi ye-GSM. Umdibaniso ongaphandle awuxhunyiwe kwi-GSM.
9 - I-TM7 ibonakala ngathi ine-eriyali yangaphakathi ye-wifi. Isidibanisi esingaphandle ngokucacileyo asenzelwanga i-wifi.
10 - Unamathuba amabini ngoku:
1- Ngaphandle kwi-GSM
Kuxhomekeka kwindlela oza kusisebenzisa ngayo esi sixhobo kuya kufuneka ukhethe ukuba uza kudibanisa ntoni.
11 - Kule meko sikhethe ukudibanisa i-wifi. Ungakutshintsha ngokulula oku kamva.
credits: Ingxelo yefoto yenziwe nguMarcel Goedemans yaguqulelwa nguFilip Everaert
Yongeza ibhetri yangaphakathi kunye ne-GPS kwi-Inrico TM-7 ngu-OK8NWO
Uhlengahlengiso lwangaphakathi lwebhetri
Abantu abaninzi bayakhalaza kubandakanya nam, ukuba kwiimoto zangoku unikezelo lwe-12V lusika ukubonelela kwi-TM7 xa ucinezelo lucimile. Ndibeka ityala ukukhutshwa kunye nokuchaneka kwezopolitiko. Kancinci njengeqhosha lokuqala lokumisa ngokuzenzekelayo lenjini.
Ndidiniwe yile ngxaki yebhetri, kuba i-TM7 iyacotha ukuqala kwaye ngokulungileyo ayisiyiyo i-Android ekhawulezayo ekufuneka ndijongane nayo.
Umhlobo ucebise ukuba iiseli ezili-18650 kufanelekile ukuba zijongwe, khange ndiqonde ukuba zisetyenziswe kuyo yonke indawo incl izixhobo zokukhupha kunye neebhetri zebhetri. Njengoko ndingenamava ngeebhetri zeLithIon bendinoloyiko lokuba le nto izokuhamba kakubi.
Ndayalela iiseli ze-Sanyo ezingama-3400mA ezineethegi zentsimbi, ukwenza ubomi bube lula ngakumbi kulwakhiwo.
Ndabona ukuba iibhetri zeLithIon zifuna isekethe efanelekileyo yeshaja. Emva kokurhweba indawo eyaziwayo yefandesi ndafumanisa ukuba ungafumana iijikelezo zetshaja ezingama-2,3,4,5,6. Ndithathe isigqibo sokuba iiseli ezi-4 zazinokuba ngaphezulu kunokuba bendikudinga kodwa bendinegumbi ngaphakathi kwe-TM7, ke iiseli ezi-4 yayizizo. Kwakhona, ndinamandla e-15V atshintshiweyo anika u-3A onokuthi enze ukutshaja.
I-Id sele ndiyivulile i-TM7 ukufaka ikhadi le-sd, ke ndiyazi ukuba into yokuqala ekufuneka yenziwe kukuzisusa ezi zixhobo zimbini ebhodini. Oku kwenza indawo eyaneleyo yeeseli ezi-2x 2 ngapha nangapha.
Ukuzifaka iintambo ngokungqinelana nomzobo obonelelwe ngebhodi (inokuba yeyiphi na, zininzi kakhulu ukuba ungazichaza) kwaye uqiniseke ukuba yonke into ichanekile ngokwepolitiki, kwaye ikhutshiwe. Ndibeka amagwebu ngasemva kwecala ngapha nangapha ukuyeka iibhetri zijikeleza. Oko kugcina kukhuselekile kubo. Iziphumo zeDC ezivela kwibhodi ndiyithengise iparalell kwi-undercde ye-pcb ngokudibanisa kunye nokuhamba ukuya kwiitrekhi ezahlukeneyo.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka ndicebise ukuba ifuse ifakelwe kwaye inye onokuyinyusa ngasemva ukuze ujije kwi-ie umnini, okanye ubuncinci i-fuse emgceni xa kukho into emfutshane okanye nantoni na. Andizange ndingenanto kwidesika ukuba ndiyiphathe. Iswitshi yokutshintsha inokuba luncedo xa ulawula ukwenzakalisa i-android kwaye kufuneka ucime ngokupheleleyo iyunithi. Ngokwenyani awufuni kuphinda uvule kwaye ucofe iingcingo emva kwalo msebenzi kwakhona.
Ndiyibiza kangangeyure ezisi-8 kwaye ndiphela ndisebenzisa iiyure ezingama-24 ngokoqobo. Injongo yam ibingu-7.8hrs emotweni, kodwa idlulile ngendlela engaphaya kwale bendiyifuna ngokomthamo. Uqikelelo lwam ulungiselelo lweeseli ezi-3 luya kusebenza. Fumana nje itshaja echanekileyo ye-pcb.
Okwangoku, i-TM7 itsala i-130mA kwindawo yokulinda kunye ne-max malunga ne-240mA, oku kuncinci ngokwemiqathango eyiyo nje ngokuba ngumnxeba kwibhokisi enkulu. Ke, iiseli ze-18650 ziyabulala kancinci kodwa kuyasebenza.
Ukulungiswa kwe-GPS yangaphakathi ye-Antenna
Ngenxa yokusilela kwam ukunyamezelana ngokubhekisele kwiintambo emotweni ndaye ndagqiba kwelokuba ndibeke imodyuli yeGPS kwiTM7.
Ke ngaphambi kokuba ndithathe isigqibo sokukrazula i-eriyali ye-GPS ndaye ndakhangela ukuba isebenza kanjani ngaphakathi endlwini. Akumangalisi ukuba yayilungile, ke leyo ibiyinto yam yokuqala. I-eriyali ye-gps yiplastikhi enamakhasi aqinileyo kwaye ipleyiti yayisetyenziselwa ukuvula ityala. Ubukhali kunye nobukrakra kulindeleke ukuba iibhloko zeplastiki zibhabhe zijikeleze iworkshop.
Emva kokuyikhupha, ndavumela ii-intshi ezintathu okanye ezi-3 zekhebula le-coax ndaza ndayisika. Andifuni lonke ubude obongezelelweyo nangayiphi na indlela.
Sebenzisa isinyithi esihle sokunyibilika kwentsimbi ukunyuka komphezulu womhlaba, isizathu asiyiyo i-coax, kodwa isokethi kwi-TM7 kunzima ukuyifumana kwaye akukho mvume incinci yokucinezela ipini yeziko yoqhagamshelo. I-braid kulula ukuyithengisa kuyo. Njengoko singenayo enye indlela ngenxa ye-coax engenakwenzeka evela kwi-PCB, andizukuzama ukuyinqunqa ndivule kwaye ndihambe ngaloo ndlela. Susa isokethi kwaye ubeke kwi-vice okanye i-clamp ukuyibamba njengoko i-soldering i-awkward., Ndidibene nayo nangayiphi na indlela kwaye ndibeka i-antenna snug kwicala lasekunene letyala langaphakathi elingaphezulu kwebhetri esele ndiyilungisile.
Ukuhla komqondiso ngaphakathi emotweni akuhoywanga kwaye ndiye ndatyhala phantsi phakathi kwebhokisi yegiya kunye nesihlalo. Kwi-dash umqondiso ugcwele.
Yenza umngcipheko wakho. Andilwamkeli uxanduva xa kukho into engahambanga kakuhle okanye isemlilweni njlnjl. Ndingacebisa ukuba ezi mods zingaphuculwa ngandlela thile malunga nokhuseleko kunye nomngcipheko ngokubanzi. Ezi bezenziwe njengolu vavanyo lunye, ndingathanda ukuba umenzi enze ezi zinto njengokukhetha. Ukwenza ezi zinto kwakungafuneki kwaye kunxunguphele.
ezaposwa ngomhla Matshi 26, 2018 Matshi 26, 2018
Inyani yerediyo ye-Amateur ngo-2018
Yeyiphi eyona nto uyithandayo emhlabeni? Ngoku kukho umbuzo!
Uninzi lwenu olufunda eli nqaku, impendulo iya kucaca- kwiRadio ye-Amateur. Yinto yokuzilibazisa eyonwabisayo, evuyisayo kwaye, ngamanye amaxesha, iyadana ngamanyathelo alinganayo!
Kodwa ikwayinto yokuzilibazisa eye yatyhala ngokwembali imida yetekhnoloji- kwaye ihlala ibuza imibuzo ekungekho mntu wakhe wacinga ukuyibuza.
Ndiyayithanda inyani yokuba imbali yento yethu yokuzonwabisa igcwele ngabasemagunyeni abalawulayo bemihla yabo besivumela ukuba sifikelele kumabhanti athathwa ngokuba "awunamsebenzi" kwaye emva koko sibukele njengoko sibonisile ngokuhamba kwexesha ukuba lingakanani ixabiso elinokuba nalo - ewe, nkqu nabona bacinga ukuba " imigca yokubona ”.
Kuyahlekisa namhlanje ukuba ezona ndawo zifunwayo kwezorhwebo yi-VHF / UHF kunye neMicrowave, awona maqela “abona-banzi” afunyenwe kwinkulungwane yama-20.
Apha e-UK, ii-swathes ezinkulu zale spectrum zihlala zijingiswa kwaye emva koko "zithengiswe" kwelona bhidi liphezulu (into ebisoloko indibetha njengamanyala, kodwa lelinye ibali…)
Inyani nangona ininzi yesininzi seHams mihla le kwi-2018 ayisiyonto imnandi kangako.
Nditshintshe kwi-160m ngenye imini ndaye ndajongana ne-S9 yengxolo enqamlezayo ibhendi. Kwakuyi-S5 kuphela kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ndinethamsanqa ngokucacileyo - abantu abaninzi bafumana i-S9 + 20dB okanye ingxolo engaphezulu, kumaqela aliqela…
NjengoHams, sijamelana nemiceli mngeni yonke imihla evela kwimithombo yengingqi yokuphazamiseka; iiadaptha zemigca yamandla, izixhobo ezingathobeliyo ezivela kumazwe aphesheya, iirissi zemizila, izixhobo zombane ezinengxolo, izinto zombane kunye nazo zonke ezinye iindlela ze-elektroniki. Akubonakali ngathi iya isiba ngcono…
Ke sinemibutho yabanini bamakhaya edityaniswe neminqophiso emitsha esisithintelayo yokubeka ii-eriyali, nokuba ziimitha ezingama-80 ubude okanye inqaba eziphakamileyo ezingama-60. Sinabamelwane bethu bakhalaza malunga nokujonga ngamehlo kunye nokuphazamiseka okuvela kule "Radio Ham" inyuka ngendlela.
We Unokucinga ukuba imasti ye-eriyali yinto entle, kodwa kuya kufuneka sivume ukuba uninzi lwabamelwane bethu alunakuvuma-ngamanye amaxesha, ngeyona ntloni, sikhokelwa zii-XYL zethu!
Kwabaninzi, ukusebenza okuphathekayo kunika abanye ukubaleka kule nto, kodwa ayinguye wonke umntu onesizathu sokunyuka intaba nge-QRP gear kwaye adlale i-SOTA, edunyiswa kakhulu nangona kunjalo.
Ukuba kuphela iRadiyo yeHam esinokudlala nayo ikhawulelwe kwisimo sezulu esifanelekileyo kunye nohambo lokuphuma, uninzi lwethu aluzukudlala unomathotholo uninzi lweentsuku ezininzi zonyaka, akunjalo?
Ubuncinci bokusebenza kweselfowuni kuyanceda apha kwaye kugcinele usuku uninzi lwethu ngezihlandlo.
Emva koko siyasokola nenyani yokuba sibonwa, ngokuchanekileyo okanye ngokungalunganga, njengabantu abadala, abanodaka kunye nabangaphandle.
Xa uqwalasela into ene-Hams enegalelo kwimbali yoNxibelelwano, obu bubude besigqebelo.
Aba bantu bathi, bafumanise kwaye bagqibezela unxibelelwano lwale mihla, ekuthe wonke umntu ukusuka kubantwana besikolo ukuya koorhulumente bathembele kubo, ngoku bathukile njengabantu bakudala njenge 78rpm shellac disc!
Ngaba siza kunikezela ngoko?
Ke yeyiphi inqaku lokuqhubeka nokuzonwabisa? Uninzi luye lwagqiba kwelokuba abayi!
Amanani ashiya i-hobby, ubuncinci nge-anecdotally, kubonakala ngathi ayanda. Ndihlala ndibona iintengiso kwi-Intanethi apho kuthengiswa khona izitishi ezipheleleyo, kwaye apho umniniyo athetha into efana "nokuyeka emva kweminyaka engama-35- ingxolo eninzi- ubunzima kakhulu…"
Ngoku unokuba nethamsanqa lokuhlala kwindawo ethe cwaka ngombane- okanye unganakho ukufikelela kwifama enkulu okanye kwifama esemaphandleni apho kukho ingxolo encinci okanye akukho mbane- kodwa uninzi lwethu aluzukukwazi yenza oko.
Enye indlela yokuphuma?
Ngaba kukho uluvo lokuba "ukuba asinakuboyisa, bajoyine"?
Ngaba sinye isisombululo sokuthatha iRadiyo kaHam kwaye siyishenxisele kuloo ndawo mhlawumbi sinokuyicekisa ngasese kwaye ngaxeshanye siphantse simnqule? Indawo ye-Intanethi?
Ndikufumanisa kuyinto engaqhelekanga ukuba, njenge-hams, sonwabe ngakumbi ukwamkela i-intanethi kunye neekhompyuter xa zilungele thina-umzekelo, ii-CW-ers zisebenzisa kakhulu iReverse Beacon Network, abathanda iDatamode bazamkela iinkqubo ezifana ne-PSK Reporter- DX -ers baxhomekeke kwiqela abalithandayo, njalo njalo.
Sonke mhlawumbi sinesoftware esiyithandayo yokungena, iinkqubo zethu esizithandayo zokukhuphisana kunye neewebhusayithi esihlala sisenza, nokuba sifuna ukugcuma!
Kodwa ngaba sincinci nje kakhulu unoloyiko "lokuya kwihagu iphela" kwaye wamkele i-Intanethi ukuba iyintoni kanye kanye ngoku? Ngaba enye indlela eyenziweyo eyenziwe ngumntu yokusasaza? Ngaba esi sesinye sezizathu zokuba kube nzima ukuqonda yonke le nto “yeeRadiyo zeNethiwekhi?
Omnye owaziwayo wase-UK ham (kunye nombhali oqhelekileyo wephephancwadi lethu le-Amateur apha) wandibhalela ngokunyaniseka okuncomekayo kutshanje. Ucacisile ukuba wayetsala nzima kwindlela yakhe yokucinga malunga ne-Intanethi nokuba yeyiphi indlela yokusasaza, ngaphandle kwento yokuba ngokwasengqondweni uyabona ukuba kunjalo!
Wayezama ukubuyela kwimigqaliselo (njengoko ndenzayo ekuqaleni) kunye ukuqonda ukuba kungabakho enye indlela yokwandisa imiqondiso yethu, eyenziwe ngumntu kuloo nto.
Uye waqhubeka kamva evuma ukuba yenene umba kuye, yayingekuko ukuba olu hlobo lokusasaza lwalukhona, kodwa "yayihlala ikhona". (Ukulunga, loo nto iyenza yahluke!)
Ngaba kufuneka ibe ngumsebenzi onzima?
Kodwa oku kwandenza ndacinga nam!
Ngaba siyiqhelile iHam Radio ukuba ngathi "ngumsebenzi onzima" kangangokuba ukuba iteknoloji yenza indlela yokusasaza eyenza ukuba ubomi bethu bube lula, siphantse baye ukuya pooh-pooh ngayo?
Ngaba ukhona umba wesimo sengqondo? Uyalwazi uhlobo lwento… “Bekufuneka ndisebenze nzima ukuze ndisebenze i-VP8G, kutheni ke kufuneka nina ukwazi ukuyenza ngokulula? ”
Indawo entsha yokudlala
Kwi-2018, itekhnoloji efumanekayo ku-Hams isibonelele ngendawo yokudlala entsha (ukusasazeka kwe-intanethi) - iyafana, kodwa yahluke kakhulu, kwindawo yokudlala endala (ionospheric & tropospheric propagation - leyo, ngendlela, isekhona nakuthi - ayikapheli, sinako kwaye kufanele ndisayisebenzisa!)
Ngubani othi asinakudlala kwezi ndawo zombini zokudlala ngaxeshanye? Ngokuqinisekileyo yimeko yazo zombini iindlela zokusasaza ezinokusetyenziswa, ukuba yile nto ikwenza wonwabe?
Kukho into kwindalo yoluntu engathandi abanye ukuba kube lula kunokuba besinayo, kodwa ndingathanda ukubona ama-Amateurs evulekile ukuba amkele ngakumbi iitekhnoloji ezintsha kwindawo yokuzonwabisa kwaye aqonde ukuba umdla wama-Amateurs wama-21, ngenxa yamaxesha esiphila kuwo, nje hlukile Ukusuka kulawo ma-Amateurs wenkulungwane yama-20.
Akukho nto igwenxa kuloo nto-yile nto kanye iyiyo!
Abanye bethu, kunzima ukufumana iintloko zethu kubuchwephesha obutsha, ngenxa yomsebenzi onzima ekufuneka siwenzile ukufumana iilayisensi zethu. Oku ngoku kunokubonwa njengokungafunekiyo ngokungaphelelanga, nje ukuba iintloko zethu zijikeleze "i-Intanethi njengendlela yokusasaza" impikiswano. Emva kokuba yonke i-Intanethi ivulelekile kuwo wonke umntu…
Sonke sinotyekelo lokuzikhusela- oku kungenxa yokuba we unento abanye abantu abangenayo-ilayisensi kaHam.
Kodwa kwakhona, ukubeka oku ngokwembono, kunye nokubeka ngaphezulu kokuncinci, ukubanakho oku kuthetha ukuba sinolwazi olunolwazi malunga (ikakhulu) nokwakha kunye nokuvavanya i-transceivers (kwaye mhlawumbi nolwazi oluthile lwe-CW)
Ngaba zezona zinto ziphambili ngokubaluleka kwizinto ezininzi kule mihla?
Ndiyayithanda into eyenziwa nguMongameli we-RSGB, uNick Henwood G3RWF, kwiNgqungquthela yeSizwe yoMbutho ngo-Okthobha ophelileyo, ukuba i-20th Century Hams yayiba nomdla kwizisombululo zoomatshini nezombane ekusombululeni iingxaki, ngelixa i-21st Century Hams isethubeni lokuba izisombululo kwimiba kwisoftware.
Leyo yindlela enomdla yokujonga utshintsho kwizinto ozithandayo kule minyaka ingama-30 idlulileyo…
Ikhokelela phi yonke le nto?
Ngubani owaziyo? Ngaba ayisiyonto inomdla kakhulu leyo?
Itekhnoloji ye-SDR iguqula i-HF, itekhnoloji yeekhompyuter iguqula ukuthandwa kwe-CW, iDatamode kunye ne-DX-ing, (jonga nje ukunyuka kwe-FT8!) Kunye netekhnoloji yanamhlanje yonxibelelwano kunye nezixhobo zayo ezihambelanayo zisinika olona tshintsho luphelileyo- enye indlela yosasazo.
Yonwaba ngeRF- kuzo zonke iifom!
Ewe ewe, qhubeka udlale kunye neeRadiyo zeNethiwekhi ezisebenzisa i-Intanethi- zenza abahlobo bakaHam kwihlabathi liphela.
Nxibelelana, sebenzisa isoftware, sebenzisa ii-Anchors ze-Boat, sebenzisa i-QRP CW, sebenzisa ii-valve, usebenzise ii-eriyali ezinkulu, sebenzisa ii-eriyali ezincinci, sebenzisa iindawo ezixhumeke kwi-intanethi, thatha inxaxheba kukhuphiswano, sebenza ngeesathelayithi, sebenzisa i-D-STAR - yenza njalo kangangoko unqwenela!
Yonwaba ngeRF ngazo zonke iintlobo zayo - iiHam band, ewe, kodwa kunye neebhendi zeselfowuni, iibhendi ze-wi-fi kunye neebluetooth zebhendi- ngakumbi ukuba ikonwabisa!
Emva kwayo yonke loo nto, ayisiyiyo into oyithandayo ekufuneka usonwabisile ekugqibeleni?
Mhlawumbi eyona nto ilusizi kukuba "iNyaniso yeRadiyo engahlawulwayo ngo-2018" kukuba, ukumamela abantu abathile kwinto oyithandayo, unokuxolelwa ngokucinga ukuba yeyona njongo iphambili yayikukwenza uHams abe lusizi ngangokunokwenzeka!
Masisebenzise zonke ubuchwepheshe obumangalisayo obufumanekayo kuthi kwi-2018 nangaphaya- emva kwayo yonke loo nto, kunyaka olandelayo kusenokwenzeka ukuba kusenokubakho izinto zokudlala ezintsha ebaleni lokudlala!
Mna, ndedwa, andinakulinda!
© Matshi 2018 - UChris Rolinson G7DDN
ezaposwa ngomhla Matshi 18, 2018
Iileta ezintathu eziya kwiMagazini
Namhlanje ibiyimini "ye-Porn Magazine"!
Phambi kokuba ungene kwizigqibo zokungxama, le yinkcazo yomfazi wam ngosuku kwinyanga nganye xa iphephancwadi lenyanga laseBritani iRadCom libetha i-doormat yethu.
Uyazi ukuba ndiza kufundisisa kwaye ndicokise amanqaku kunye nezibhengezo, ndikhangele ukubona ukuba yintoni entsha kwihlabathi leRadiyo engahlawulwayo.
Ukuba nje bekukho ifoto ebengezelayo ye-Icom 7610 entsha…… oh ikhona, yay!
Namhlanje nangona kunjalo, yayingelilo isixhobo esitsha serediyo okanye isiqwenga sokubhala esikhuthazayo. Namhlanje ndibethwe ngokukodwa ngumsonto weeleta oya kumhleli, kwinto eyaziwa ngokuba yikholamu "yeLizwi lokugqibela".
Kubekho iseti enika umdla yezimvo ezichaziweyo malunga netekhnoloji entsha kunye nefuthe layo kwinto esiyithandayo. Kwaye ukuba ndinyanisekile, ndiyathemba ukuba ayindim ndedwa oxhalabileyo ngale nto ndiyifundayo.
Inombolo yokuqala yembalelwano ibalisa ngomlingo werediyo engahlawulwayo kunye noxanduva lwethu ngokudibeneyo njengeHams ukufikelela kwabanye ukuba bandise amanani ethu - zonke izinto ezilungileyo.
Kodwa uqhubeke wathi kwaye ndicaphula "… Ewe, abancinci bazakuba nee-iPods zabo, ii-iPads iPhones kunye nezinye, kodwa akukho 'magic' ngezi zixhobo"
Ndiqinisekile ukuba umbhali akazami kuvala nabani na xa ebhala oku - kubonisa nje ukuba kunzima kangakanani kuthi abadala ukujonga umhlaba ngamehlo abantu abancinci kunathi.
Kodwa masinyaniseke ngokumasikizi, ngokuqinisekileyo oku kumele enkulu ukungaqondi kakuhle ukuba baphi abantu benkulungwane yama-21.
Zama ukuxelela i-99% yabemi banamhlanje ukuba akukho "mlingo" kwizixhobo zabo eziphathwayo!
Isixhobo esiyikhompyutheni yesikrini sokuthinta; isixhobo esinamandla ngaphezu kwePC yedesktop kwiminyaka embalwa edlulileyo; isixhobo esivumela unxibelelwano olukhawulezileyo kwihlabathi liphela ngevidiyo ye-HD ephilayo ukongeza kwimisindo kunye nomyalezo okhawulezileyo; isixhobo esikwaziyo ukugcina ilayibrari yomculo epheleleyo kuso…
Ngokukrakra? Asingomlingo lowo? Kubonakala ngathi ngumlingo kum! Isilayidi esincinci seglasi esenza nantoni na kwibala lezonxibelelwano onokucinga ngalo? Wowu!
Khumbula iWindows 3.1?
Ukujonga okwenyani kuthi!
Uninzi olungaphantsi kweminyaka engama-30 alukhumbuli ixesha ngaphambi kweqhosha elithi "Qalisa" kwiWindows! (Vumela oko kungene!)
Uninzi lwabantu abangaphantsi kweminyaka engama-30 abanalo nofifi lokuba yintoni “iqhina lokulungisa” kunomathotholo.
Uninzi olungaphantsi kweminyaka engama-30 alunalo uluvo lwento eyiRadio kaHam, eyenzayo okanye eqondayo ukuba isebenza njani (kwaye babonisa umdla omncinci wokufuna ukwazi nokuba, ngamava am!)
Nangona kunjalo, uninzi oluphantsi kwama-30s ubuncinci kwi-smartphone enye, ithebhulethi okanye ikhompyuter kwaye mhlawumbi uyazi ukuba linjani ikhowudi yokubhala kuyo nayo.
Oku kubonisa isikali somsebenzi esijongene nawo ekufumaneni abantu abatsha banomdla kwizinto esizithandayo. Ngelishwa, siyabonwa, ukuba siqondwa konke konke, ukuba siphelelwe lixesha, siphelelwe lixesha kwaye asisasebenzi.
Kodwa yayingengawo kuphela amagqabantshintshi andibethileyo ngendlela engachukumisi.
Umbhali wesibini wakuphawula oko “… Unxibelelwano ngonomathotholo abathandwayo balatha kwinqanaba elingenasiseko sikhulu phakathi, ngaphandle kukaMama wendalo othandekayo! Thatha la malungiselelo kude kwaye zonke ezo zixhobo zibabazekayo zinokuba zizinto ze-elektroniki! ”
Kulungile, ndingaphikisana nebango lokuba zonke I-Ham Comms yalatha-ukuya-kwinqanaba, kodwa ndiyabona ukuba uthini umbhali.
Kodwa xa ndicinga ngayo, kwiminyaka engama-25 okanye edlulileyo ndinesixhobo esiphathwayo, andikhumbuli nangelinye ixesha singekho kunxibelelwano lwenethiwekhi.
Izigidi zichithwe ukuphucula i-Intanethi kwaye ngakumbi ukufikelela kuyo kuyo, zombini ngokwesantya kunye nokugubungela. Ewe inokucinywa, ewe isemngciphekweni kwinjongo enobungozi, kodwa kuma-99.9999 ephindaphindwe ngepesenti yexesha, iyasebenza!
Ndingatsho ukuba mancinci amathuba okuba ezi zixhobo zibe "zizinto ezilahlwayo ze-elektroniki", ngaphandle kwesimo se-apocalyptic…
...endizisa kumbhaleli wesithathu.
Waxela kwangaphambili ukuba, kumnyhadala weArmagedon, "Uthungelwano lweeselfowuni, imithombo yeendaba kwezentlalo, oomatshini bemali, amagunya asekuhlaleni, ukutya, izitishi zamandla, ukuhambisa amanzi, igesi nombane kunye nabavelisi bamafutha, umkhosi, amapolisa, umlilo kunye neenkonzo zeenqwelo zezigulana." zingavalwa zonke.
Uqukumbela ngelithi "Irediyo engahlawulwayo kunye neRAYNET zinokuba yinxalenye yeendlela ezimbalwa zonxibelelwano ezisaseleyo kwilizwe."
Kwakhona ngekhe ungavumelani ngaphezulu kwaye ndiyayifumana inqaku.
Kodwa ngenene, ukuba zonke ezi zixhobo kunye nemibutho yehlile kumnyhadala kwaye yindoda nganye kuye, andicingi ukuba eyam ingcinga iya kuba kukuchitha ixesha ndisenza idipole ye-40m kwaye ndisebenzisa i-EMP yam ekhuselweyo (ubuyicingile lonto, andithi?FT-817 ukubona ukuba ndinganxibelelana na namanye amalungu endlala angathathi ntweni, nawo azama ukusinda emva…
Ndiyathemba ukuba ababhali beleta bayakundixolela, njengoko ndifumana "apho bevela", kodwa ndiziva ngathi baphoswa yeyona nto ibalulekileyo.
Inqaku lelo kukuba, kwi-21st Century, sinendlela entsha yokusasaza enokuthi wonke umntu akwazi, kwaye ayenze, sele efikelela (ngaphandle kweemviwo kunye nelayisensi ekhethekileyo) -Intanethi.
Kwaye kuya kuba kukuzihlaziya kuthi ukungayihoyi loo nto okanye okubi ngakumbi, siyithobe, kuba intsha, yenziwe ngumntu kwaye ayisiyiyo-ionosphere esiyithandayo sonke!
I-ionosphere sisixhobo sendalo esingummangaliso, nangona sine-S9 yengxolo kwiindawo ezininzi ezisezidolophini kwezi ntsuku, ngelishwa kuya kusiba nzima ukwenza unxibelelwano olunentsingiselo ngendlela esasiqhele ukwenza ngayo. Ungayithandi okanye ungathandi, i-Intanethi yeyona nto ikhethiweyo kwi-21st century.
Yintoni le uyenzayo neeRadiyo zenethiwekhi?
Apha sinezixhobo, ngandlela-thile, ezingezizo oonomathotholo ngendlela eqhelekileyo, kodwa zisasebenzisa iRF ukunxibelelana. IiRadiyo ezingasebenzisi i-ionosphere, kodwa zisebenzisa le ndlela intsha yokwandisa, i-Intanethi.
Ndicinga ukuba uninzi lwabantu kwezi ntsuku banokunxulumana nezi zixhobo- ziqhelekile ngokwaneleyo ukuba ziyaqondakala, kodwa zahluke ngokwaneleyo ukubazisa kulonwabo lwendlela ezi-2 zonxibelelwano.
Ngamanye amagama, yindlela enokubakho kwindlela yethu yonxibelelwano ngonomathotholo ngokubanzi, kunye noRadio ngokukodwa.
Ewe ezinye azinakuqhubela phambili kude kuye kwiLayisensi yeHam, kodwa ezinye kungenzeka kwaye kufanelekile ukuba ibeyinto elungileyo- kufuneka siqale apho bakhoyo abantu kunye netekhnoloji abayisebenzisa mihla le.
Ngokuqinisekileyo asinakubanika into ebonakala ngathi ingaphezulu kunxibelelwano, oluhamba noviwo, njengeyona ndlela yokungena kwinto, ekugqibeleni, into oyithandayo?
Ndiyoyika imeko yangoku yemicimbi kwiHam Radio enokuthi ikhokelele ekuphelisweni kwethu njengendawo yokuzilibazisa (ngaphambi kokuphela kwesiganeko sehlabathi esichazwe ngumbhali wencwadi yesithathu eya kwiRadCom.)
Sthandwa sam, ndilitshitshisile ilizwe!
Kwiminyaka eyadlulayo, ukunxibelelana umgama omde kwakunokwenzeka kuphela ngeefowuni ezibiza kakhulu ezibekwe ngumqhubi okanye ngeRadio yeHam. Akunjalo ngoku - i-intanethi ephathekayo ilisusile ilizwe kwaye iHam Radio kufuneka iphinde izichaze ukuba ihlale ifanelekile kwi-21st Century. Andiqondi ukuba siza kuyiphumeza loo nto ngokucebisa ukuba akukho "mlingo" kwizixhobo eziselfowuni!
Ngapha koko, asinakuphinda sithathe nantoni na - abantu abanayo "imeko" evumela ukuba baqonde ukuba yintoni iRadiyo kaHam, ngoko ke kufuneka sifumane ezinye iindlela zokunxibelelana nabo. Ukuqala ngezixhobo abasele benazo kwaye banazo epokothweni kunye nabo ngokuqinisekileyo yenye yeendlela ezifanelekileyo zokwenza oko. IiRadiyo zenethiwekhi ziluhlobo ngqo lwesixhobo esinokwakha kuloo mdla.
Usebenzisa i-Android OS, usebenzisa i-touch screen, ekwaziyo ukusebenzisa ii -apps abasele bezisebenzisa, bakwazi ukuba yifowuni, isixhobo se-intanethi, kodwa ukuseta kunxibelelwano lwesitayile se-amateur, banokuba sisixhobo se-hybrid esifanelekileyo, okanye ubuncinci ukuqala ukukhula kwesi sixhobo.
Ndiya kubongoza yonke i-Hams ukuba igcine ingqondo evulekileyo malunga nesi sifundo kwaye ingayigxothi i-Network Radio phenomenon ngaphandle kwesandla.
Iya kukhokelela phi, ngubani owaziyo? Kodwa kunokuba kwikamva eliqaqambileyo kunokoyika abantu abaninzi…
U-NB uChris wenza intetho kwiiRadiyo zeNethiwekhi eWythall Hamfest ngaseBirmingham UK ngeCawa umhla wama-25 kuMatshi 2018 nge-11.00 kusasa. Bonke bamkelekile.
ezaposwa ngomhla Matshi 7, 2018 Matshi 7, 2018
“Ayiyonyaniso le Radio kaHam!” nguChris G7DDN
emfanekisweni - Inrico TM-8
Bendisandula ukucinga ngomlando omangalisayo weRadio ye-Amateur, ukusuka koovulindlela bokuqala abanezinto zokuhambisa iintlantsi kunye nomdyarho wokufumana imiqondiso yokuqala ngaphesheya kweAtlantic, ukuya kubathandi beMicrowave abaphuhlise indlela eya phambili kunxibelelwano lwendawo kunye netekhnoloji yesathelayithi (kwaye, sebeza oku, iteknoloji yefowuni ephathekayo!)
Imbali ye-Ham Radio kunye ne-teknoloji ye-RF ayinakulinganiswa - bekukho nexesha apha e-UK apho kukholelwa khona, ngokungathandabuzekiyo, ukuba i-call ye-Ham ye-Radio inokukunceda ufumane umsebenzi kunye ne-BBC!
Nangona kunjalo utshintsho luye ngokukhawuleza okukhulu, xa sithetha, kwimbali yokuqala kanomathotholo. Ukusuka kuvavanyo lukaMarconi ukuya kwiZikhululo zoSasazo zikaRhulumente zokuqala yayineminyaka engama-25 kuphela okanye kunjalo. Umabonwakude wayengomnye kuphela iminyaka eli-15 okanye engaphaya koko, njalo njalo…
Ukuxhathisa (okanye ukungaziva ku- "Ohm")
Nangona kunjalo imbali yeHam Radio yenye yezo ukumelana Ukutshintsha-hayi koovulindlela, bahlala beyizikhuthazi zayo, kodwa kwi-Hams "yemihla ngemihla".
Makhe ndibone ukuba ndingakunika na imizekelo, ulwimi lwam lutyalwe ngokuqinileyo esidleleni sam…
“Ayisiyo iRadio Ham leyo!”
Ii-Hams zakuqala zazisebenzisa i-CW kakuhle kakhulu. Ke xa kwakufika u-AM njengenye yeendlela zokuqala zezwi, kwabakho isiphithiphithi…“Ayiyonyani iRadio kaHam! Irediyo yokwenene yeHam ibandakanya ukusebenzisa iMorse Key! Yintoni esehlabathini kukuzonwabisa okuzayo, usebenzisa ilizwi ukunxibelelana namaza omoya? Kukungcola! ”
Kodwa ubomi baqhubeka, i-AM yafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Ke itekhnoloji ye-transistor yafika ngasekupheleni kweminyaka yee-1940 kunye nee-1950s zokuqala, ikhuthaza impendulo. "Bambelela! Ayisiyonto yoqobo kaRadiyo. IiRadiyo zoqobo zeHam zikhanya ebumnyameni- asinakuba nayo le teknoloji incinci- azisokuze zihlale ixesha elide njengezivalo okanye zithembeke ”
Kodwa ubomi baqhubeka, izixhobo zombuso eziqinileyo zafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Emva koko kwafika i-SSB kwaye yayikho Kaninzi ukungoneliseki… “Ayiyonyani le Radio kaHam. IiRadiyo zoqobo zeHam azivakali ngathi nguDonald Duck! Yinto eyaziwayo, izakuwa kungekudala xa abantu bedikiwe kukuva loo mazwi angenangqondo ”
Kodwa ubomi baqhubeka, i-SSB yafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Emva koko i-FM kunye nabaphindayo bafika kwaye kwabakho ukwahlulahlula phakathi kwento oyithandayo (kwaye kwakungekho tyaba okanye nkqo nokuba!) “Ayiyonyani le Radio kaHam. I-Real Ham Radio ayifuni ukusebenzisa loo nto phezu kwenduli ukunceda umqondiso wakho ufike ndaweni ithile! Irediyo yoqobo yeHam yalatha! ”
Kodwa ubomi buqhubekile, ii-FM kunye nokuphindaphinda kwafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Kwaye kwafika iPacket Radio kwaye ibikhona yenene inkathazo… “Ayiyonyani le Radio kaHam. I-Radiyo yeRadio yeHam ayifuni enye yezi zinto zintsha zekhompyuter ukuze zisebenze. Thatha isitshixo sakho okanye imakrofoni yakho kwaye uqalise ukusebenza nezinye iiHams ngokufanelekileyo! ”
Kodwa ubomi baqhubeka, iPacket Radio yafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Ke kwafika iiDigimode kwaye kwakusekho iingxwabangxwaba… “Ayiyonyani le Radio kaHam. Irediyo yokwenene yeHam ayibandakanyi ukuthayipha imiyalezo kwezinye iiHams- kunye nezo khompyutha zitshabalalayo kwakhona! Benza ntoni eMhlabeni kwizinto abazithandayo? ”
Kodwa ubomi baqhubeka, iiDigimode zafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Emva koko kwafika iindlela zeDigital Voice kwaye zazikhona ezinye kakhulu ukungavisisani okunzulu… “Ayiyonyani le Radio kaHam. IiRadiyo zoqobo zeHam azivakali njenge-R2D2! Oonomathotholo bokwenyani abayisebenzisi i-Intanethi ukubanceda bajikeleze umhlaba, NGOKUQINISEKILEYO KUFANELE basebenzise ukusasaza komoya. Kwenzeka ntoni kule hobby ??? ”
Kodwa ubomi baqhubeka, i-D-STAR kunye nezinye iindlela zedijithali zeLizwi zafumana ukwamkelwa kwaye konke kwakulungile eHamland kwakhona.
Emva koko sifika namhlanje kwaye iiRadiyo zeNethiwekhi ziza kwindawo yesehlo kwaye sonke isihogo siyaphuma! "Ayisiyonto yoqobo kaRadiyo. Yi le ukudlala kwiRadiyo kaHam-akukho RF yeAmateur ke ayisiyiyo iRadio kaHam. Ngaphezu koko, ndisebenze nzima ndifumana ilayisensi, wonke umntu kufuneka nayo! Bangathini abantu ukunandipha unxibelelwano ngendlela engachanekanga! ”
Ngaba ubomi buya kuqhubeka kwaye konke kuya kuphinda kulunge eHamland kwakhona?
Umceli mngeni wenkulungwane yama-21
Kungenxa yesi sizathu le nto ukufika kweeNethiwekhi zeeRadiyo kubonisa umceli mngeni kuthi njengoHams - kusibangela ukuba sicingisise ngokupheleleyo ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumsasazi weRadiyo kwi2018 nangaphaya.
Kwaye kuyakufuneka siqale ukujongana nemibuzo efana nale ...
Yintoni kanye le ichaza iRadio Amateur?
Sithetha ntoni ngo "Amateur RF"?
Ngaba i-RF iveliswe ngumntu ongahlawulwayo?
Okanye ngaba iRF iveliswe kwibhendi ethile esiyabelwe ngurhulumente?
Ukuba kunjalo, ngaba kufanelekile ukuba kunjalo?
Ngaba ayinakuba yenye into?
Ngaba ikho le nto ibalulekileyo?
Kuthekani ngeebhendi zethu?
NjengoHams "sinamathele" kwiibhendi zethu. Nokuba yi-160m okanye i-2m, siphantse sanemvakalelo yengqondo "yobunini" babo.
Sineebhendi "esizithandayo", sineebhendi thina ze rhoqo.
Sine "yethu" indawo yokuhamba kwaye ezinye iiHams ziya kufumana "ukuzithemba" ukuba umntu ongathandani naye akekho "kwiqela" labo Amarhonya ukusebenzisa “amaza” abo!
Kwaye ngekhulu lama-21, ndiyakholelwa ukuba umba opheleleyo weebhendi kunye nezixhobo ezihamba rhoqo uya usiba ngakumbi. Kutheni le nto inokuba njalo?
Umzekelo osasazwa kwiRadio
Kungekude kudala, besinokungena kwizikhululo zosasazo kwiLong Wave (LF), Medium Wave (MF), Short Wave (HF) nakwi-FM (VHF Band II). Izitishi zihlala zibhekisa kubo rhoqo: "247 yeemitha iRadio 1" okanye "1152 AM" umzekelo. Yabonwa njengenxalenye yesazisi - uninzi lwalunamagama kumagama esitishini!
Kodwa namhlanje, siya sisiva kancinci malunga noku. Xa umamele izikhululo zosasazo kwezi ntsuku, zibonakala ngathi zibaleka zinika amaza, endaweni yoko zivakalisa ukuba zikwi "FM, DAB nakwiDijithali" okanye into efana naleyo.
Ngoba? Kungenxa yokuba unomathotholo yinto oya kuthi uyisebenzise kwenye yeendlela ezimbini- nokuba ngokwamanani (nge-DAB okanye ngeSatellite okanye ngeendlela ezifanayo) okanye ngokusasaza nge-Intanethi. Ukuhamba rhoqo nangokwandiswa, iibhendi, azisebenzi njengoko bezinjalo ngaphambili.
Abasasazi abakhulu baya besuka kude kunomathotholo “wesiko”.
Kwi-Wave emfutshane-kuphela amazwe ambalwa kunye namaqela ahlukeneyo enkolo abonakala esebenza apho ngoku. Abafana abakhulu bayaphuma kwiLave eNde kunye nePhakathi nayo. Ukuba abasasazi bezorhwebo bayashenxa, kufuneka sibuze ukuba kutheni.
Ngaba ibhendi ibalulekile?
Ndinokukrokrela ukuba oku, ngokuyinxenye, kuba amabhanti kunye nokuhamba rhoqo akunamsebenzi kangako kwezi ntsuku. Izixhobo zerediyo zasekhaya zininzi malunga namaqhosha okutyhala kunye nezikrini ezikusa kwisikhululo sakho kwangoko, kunokuba ucofe ukudayala ngokuhamba rhoqo. Yimveliso yokugqibela ebalulekileyo, ayisiyiyo indlela eza ngayo kuwe.
Ngubani osusa unomathotholo wosasazo lwale mihla ngokucofa ngesandla? Nabani na? Yayiyeyona nto iphambili kuzo zonke iiradiyo hayi kwiminyaka emininzi eyadlulayo! Nditsho ndikhumbule ukuhlengahlengisa i-VHF TV yakudala ngokudayala kwiintsuku zam zokuqala kule planethi- leyo ngempela ibonakala ingaqhelekanga ngoku!
Ukuya kwelinye inyathelo, uninzi losasazo alusebenzisi i-RF ngqo kuzo zonke ezi ntsuku! Sisawabiza ngokuba "zizikhululo zikanomathotholo" (okanye ngamanye amaxesha "izikhululo zikanomathotholo ze-Intanethi")
Ngaba sikhona isizathu sokucinga ukuba iRadiyo kaHam njengeyona nto uyithandayo ayizukuhamba ngendlela efanayo? Elinye lamandla ethu ngokwembali njenge-Hams ibikukuba silungile ekwamkeleni iitekhnoloji ezintsha nokuzilungelelanisa ukuze sizisebenzise.
Inqaku endikhokelela kulo yile - ndiyarhana ukuba "amaqela" kunye "noqhelaniso" akunangxaki enkulu kubudala bedijithali ngendlela esinokuthi ngayo ezifana ukuba babe.
Eyona nto ibalulekileyo, iibhendi zibakhona kuphela ngenxa yokusasazeka.
I-160, i-40m, i-20m, i-10m, i-2m njlnjl. Zonke, ngokwenyani, yimigca ye-line-of-sight. Ukuwenza lula umxholo, zizinto ezibonakalayo ze-ionospheric okanye ze-tropospheric ezonyusa ukusasazeka komgca wokubonwa kwaye uyijike ibe yenye into.
Ibhendi nganye ineempawu ezahlukileyo zokusasaza njengesiphumo, inika iqela ngalinye “isimilo” salo kwaye kwabanye, ukufundisisa ukwanda kukodwa kuyinxalenye yomdla wokuzonwabisa.
Usasazo olwenziwe ngumntu lwahlukile
Xa sicinga (kwaye sisebenzise) Internet njengesixhobo sokusasaza esenziwe ngumntu (yile nto siyiyo-sisasaza imiqondiso kwihlabathi liphela) emva koko umxholo weebhendi uya ungafuneki.
I-Intanethi ifana nenye, phantse ngokungapheliyo, "ibhendi" yehlabathi jikelele, ihlala ivula i-S9 + 40 kuwo onke amazwe i-24/7 inee-vagaries ezimbalwa - kwaye ingabi ngelizwi kuphela, kodwa ngombono kunye nezinye iindlela zedijithali ngokunjalo.
Beka njalo, ngubani ongafuniyo ukuyisebenzisa? Ngaba iya kuba yinto ebalulekileyo ukuba ubuyintoni (okanye awukho), ukuba bekukho enye?
Ke umba "weebhendi", apho uninzi lwethu luchaza imisebenzi yethu, inokuba iyadilika phambi kwethu kwesi sizukulwana sedijithali kwaye sisenokungayiqondi nangoku! Oko akutsho ukuba iibhendi zethu azisekho, ngendlela-ngokucacileyo kunjalo. Yiyo kanye loo nto, kubantu abaninzi kwezi ntsuku, iibhendi ziyinto yangaphandle.
Njengokuba umdlalo uyakuqala ukuhambelana nezinye iimpembelelo zoku, eminye imiba iya kuqala ukuvela, enje…
Ngaba sisafuna uviwo kwakhona ukuze sifumane ilayisensi?
Ngaba siyafuna nelayisensi?
Loluphi uhlobo okanye iifom ekufuneka luzenzile, ukuba kunjalo?
Ngaba singabona ukugcwala kwabantu abatsha beza kulowo wokuzonwabisa ngenxa yokuba ukungena kuwo ngokuthe ngqo?
Siza kumelana njani nayo?
Ngaba nathi ufuna kungena abantu abatsha, ngakumbi ukuba izimvo zabo zahlukile kwezethu?
Iza kubonakala njani into oyithandayo kwiminyaka engama-20?
Kwenzeka ntoni kumaqela ethu “emveli”?
Ndilindele ukubona ingxoxo eninzi kwixa elizayo malunga noku - kuyonwabisa ngokwenene!
Ngaphandle Kwommandla Wentuthuzelo…
Nangona kunjalo iyakwenza uninzi lwethu luzive lungonwabanga kwaphela - umhlaba uya ushukuma phantsi kweenyawo zethu kwaye isiko lesiqhelo leHam Radio lilindele umceli mngeni wokutshintsha nokuzilungelelanisa…
Andiboni ukuba le yinto embi - ingxoxo ethembekileyo ekrelekrele kufuneka yamkelwe. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukugcina iingqondo zethu zivulekile. Asifanelanga sayala into kuba nje intsha okanye kungenxa yokuba icela umngeni kwimibono yethu yokuba indawo kanomathotholo iya phi.
Ngokulinganayo, akufuneki ukuba simlahle ngaphandle umntwana ngamanzi okuhlamba kwaye siyikhabe iRadio yeHam yemveli njengoko ibiyiminyaka. Ionosphere kunye ne-Intanethi ziyancedisana, hayi kukhuphiswano.
Ukuba ufunde oku kude kwaye ufuna ezam iingcinga…
Kutheni le nto singenakubona okona kulungileyo kuwo omabini la mazwe? Ngokuqinisekileyo sinako.
Iiradiyo zenethiwekhi (kweli nqanaba kuphuhliso lwazo ubuncinci) azizikhuphiswano zoonomathotholo, umzekelo, kwaye i-Intanethi ayikabi yinkqubo elungele ukhuphiswano. (Oko kungatshintsha kunjalo!) Ke ukukhuphisana kusemgangathweni kumaqela esiqhelo sikaHam. Ndizokubona kwiimitha ezingama-80 - 59 001 OM…
Nangona kunjalo, abafowunelwa abathembekileyo abakumgangatho ophezulu kwihlabathi liphela ziyinto enye yeNethiwekhi yeeRadiyo ezigqwesileyo, kutheni ungasebenzisi nje loo nto xa ufuna (okanye xa iibhendi zeHF zigcwele ingxolo okanye zifile)? Ndiyavuma! Andiluboni ulwandiso lokhetho kwi-hobby njengento embi.
Ngaba inyani yokuba ndigqithisela kwii-frequency zamaselula e-800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz okanye kwi-Wi-Fi kwi-2.4GHz okanye kwi-5GHz? Ngaba kukho into embi eyenzekileyo malunga naloo nto? Ngaba kukho isidima ngakumbi ekusebenziseni i-21 MHz okanye i-432MHz, umzekelo? Zizi “frequencies” nje emva kwayo yonke loo nto.
Ndikhetha ukuzibona ndilandela isiqubulo seklabhu yerediyo yasekhaya, "Ukonwaba ne-RF". Nokuba ndikhetha ukusebenzisa iRadiyo yeNethiwekhi okanye isikhululo sesiseko se-Yaecomwood ayisiyonto ifanelekileyo kum. Ukonwabela into oyithandayo yinto yonke, kungenjalo kutheni unomdla?
Nokuba yeyiphi na indlela eya kule mpikiswano kwaye nokuba loluphi na ulwalathiso lwento oyithandayo, umgca wam uya kugcinwa zonke ubutyebi be zonke inkalo yokuzonwabisa.
Ngamanye amagama, ukubuyela kwisihloko sesi siqwenga kwaye utshintshe igama elinye, “Ewe BONKE 'yokwenene' uHam Radio ”
ezaposwa ngomhla Matshi 1, 2018 Matshi 1, 2018
Ikhuselekile: Uhlaziyo lweFirmpod N58 lwefirmware ka-20180301